Qalabka Korontada & Qalabka Korantada Korontada - GO! SPECTRUM SCHOOL (FULL TIME // TSO // CAMPUS RUGGEVELD)
& TABABBARKA ISTICMAALKA ELEKTALKA
spectrum School > koorsooyinka our > korontada > Qalabka korontada & Farsamada rakibaadda korontada
ah tababar buuxa ee TSO Tababarka korontada & farsamooyinka rakibaadda korontada inaad barato korontada iyo aragtida rakibida iyo inaad isu diyaariso xirfado farsamo oo dhinaca qaybta korantada ah. Tababarkan waa mid xoogan wax-barashada laakiin sidoo kale wuxuu ku siinayaa saldhigga aasaasiga ah. Shaybaarkayagu badanaa waa mid mashruuca shaqeeyey. Tani waxay la socotaa layliyo iyo barashada goobta shaqada.
ah 2e Heerka Qalabka Korontada baro in lagu rakibo ilaha iftiinka iyo kuleyliyeyaasha, rakibo xireyaasha, xiro fiilooyinka korantada, ogaadaan iyo dayactirada cilladaha. Waxaad ku xiraysaa qaybaha korontada ee calaamadaha kala duwan iyadoo loo eegayo AREI oo waxay ku rakibaan qalabka korontada ee loo adeegsado. waxaad dejisey kuraasta qalabka korontada ee degaanka iyo kuwa caadiga ah (aan ahayn kakan) oo sameeya jeegag aasaasi ah.
ah 3e class Xeeladaha rakibaadda korontada aqoonta aasaasiga ah ee shahaadada 2e ayaa sii xoojin doona oo la ballaarin doonaa. Waa inaad awood u yeelatid inaad falanqeeyo shaqada shaqada, akhriso jaantusyada iyo fulinta cabirada. Hirgelinta, dayactirka ama dib-u-hagaajinta qalabka korontada, laakiin sidoo kale dhinacyada culus ee dhismaha guryaha ayaa lagu falanqeynayaa. Waxaa laguu tababaran doonaa farsamo yaqaan qalabka korontada ku shaqeeya. Waxaad baran doontaa farsamooyinka aasaasiga ah ee qalabka guryaha, mishiinnada, farsamooyinka PLC, automation, cabbiraadda iyo farsamada gacanta.
Ma xiiseyneysaa qalabka korontada iyo mashiinada? Miyaad waxtar badantahay maahan? Ma u shaqaysaa si sax ah oo madaxbannaan, miyaad isha ku haysaa faahfaahin?
Waxaad mar walba ka bilaabi kartaa barnaamijka korontada ee tamarta, inkasta oo aqoonta aasaasiga ah ee korontada iyo mishiinada ay hubaal tahay in lagu daro. Tababarku waa mid la taaban karo oo aan ahayn aragti, laakiin ma yareeynin dhinaca farsamada -qoraalka ee barnaamijkan!
"Waxaannu ka shaqeynaa mashruuc ku salaysan bilawga ilaa dhammaadka; iyadoo gacmahayaga iyo tiknoolijiyada kumbiyuutarada gacanta lagu ilaaliyo. Taas oo aad isku dhejisid kadibna dhab ahaantii u arko shaqada, waxay i siisaa farxad weyn. "
Kadib shahaadada 3e Electromechanics waad heleysaa Dibloomada waxbarashada dugsiga sare. Koorsadani waxay ku siineysaa aasaas adag si aad u bilowdo daraasad sare oo ku saabsan edebta. Waxaad ku bilaabi kartaa adigoo rakibaya, koronto yaqaan ama dayactir, laakiin waxaa jira fursado kale oo badan. Waxaad ka heli doontaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan daraasaddo dheeraad ah kaddib kooraskan halkan.
Kala hadal halkan miisaska casharrada ee tababarka TSO Tababaraha Korantada / Farsamooyinka rakibaadda korontada: